Basket-ball amin’ny tora-pasika :: Iray vondrona amin’i Mongolia sy Nederlandy ary Brezila i Madagasikara • AoRaha
Basket-ball amin’ny tora-pasika Iray vondrona amin’i Mongolia sy Nederlandy ary Brezila i Madagasikara
Tafiditra ao amin’ny vondrona C ireo mpilalao malagasy miaraka amin’i Mongolia sy Nederlandy ary Brezila amin’ny lalao maneran-tany ho an’ny taranja lalaovina amin’ny tora-pasika na “jeux mondiaux de plage”.
Hanainga anio ho any Qatar ny ekipam-pirenena malagasin’ny basket-ball lalaovin’olona telo na ny “3X3”, sokajy vehivavy, latsaky ny telo amby roapolo taona. Fandraisana anjara voalohany amin’ny “jeux mondiaux de plage” ity fifaninana ity, izay hatao amin’ny 12 ka hatramin’ny 16 oktobra ho avy izao. Hiakatra kianja voalohany ireo mpilalao malagasy amin’ny 13 oktobra 2019. Hifandona amin’i Mongolia izy ireo amin’izany dingana fifanintsanana izany. Hihaona amin’ireo mpilalaon’i Nederlandy kosa avy eo. Hamarana io dingana io ny fiatrehan’izy efa-bavy Malagasy ireo mpilalao breziliana. Fandraisana anjara voalohany ity fifaninanana ity ho an’ny
delegasiona malagasy. Hametraka fanamby izy ireo amin’ny hifandonana amin’ireo firenena avo lenta amin’ny taranja raha ny nambaran-dRahelimanana Chine, isan’ireo efa-bavy hisolo tena an’i Madagasikara any Qatar.
Baolina lavalava- Vehivavy :: Ho mafimafy ny miandry ny Makis any Tonizia